Home Myanmar Travel Info
Myanmar Travel Information media is an award-winning program, mixed with online and offline, to maximize reacing out to travellers to Myanmar.
This is our 10th anniversary of running this effective and success-proven tourism media. These CDs and bookets were being distributed to most interested tourists at Myanmar embassies worldwide.
1.Myanmar Travel Information (MTI)
ကမ္ဘာ့လူသားတွေဟာ သမိုင်းမှာ စံချိန်တင်ရတဲ့ အထိ အရင်ကထက်ပိုပြီး ခရီးသွားလာကြပါတယ်။ ၂၀၁၂ ခုနစ် UNWTO (World Tourism Organization) ရဲ့ ကိန်းဂဏန်းများအရ ကမ္ဘာ့ ခရီးသွားလုပ်ငန်းဟာ သမိုင်းမှာ ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ကမ္ဘာ့လှည့် ခရီးသည် ဦးရေ သန်း ၁၀၀၀ ကျော်သွားပြီး စံချိန်တင်ခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှာ ကမ္ဘာ့လှည့် ခရီးသည် စုစုပေါင်း ၁၀၅၈၀၀၀ ကျော် ၀င်ရောက်ခဲ့ပြီး စံချိန်တင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ရန်ကုန်လေဆိပ်က တိုက်ရိုက် ၅၅၉၀၀၀ ဦး ၀င်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။
ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသည်တွေ အများစုဟာ ခရီးသွာဖို့ စိတ်ကူးတဲ့ အချန် ၊ အစီအစဉ် ဆွဲတဲ့ အချိန် နှင့် Book လုပ်တဲ့ အချိန်တွေမှာ Street Map ကို မကြည့်ကြလေ့ မရှိပါဘူး.။ Overview map ကိုပဲ ကြည့်တတ်ကြပါတယ်။
မြန်မာပြည်ကို သွားရင် ကောင်းမလားလို့ စဉ်းစားနေတဲ့ အချိန်မှာ ဘယ်ကို သွားမယ်ဆိုတာ စဆုံးဖြတ်လေ့ရှိကြတယ်။
မြန်မာပြည်နဲ ပတ်သက်တဲ့ ဓာတ်ပုံတွေ အမျာကြီးလျှောက်ကြည့်တယ် ။ Tour Compnay တွေရဲ့ Tour Program တွေကို ရွေးကြပါတယ်။ Airline ကို ရွေးကြပါတယ်။ ဘယ်မြို့မှာ ဆို ဘယ်ဟိုတယ်မှာ တည်းကြမယ်လို့ ရွေးကြပါတယ်။
ဈေး၀ယ်သူဟာ ဈေး၀ယ်ဖို့ စဉ်းစားနေတဲ့အချိန်ပါ။ ဒီအချိန်ဟာ Tour Operator, Hotel, Airline တွေအတွက် အရေး အကြီးဆုံးအချိန်ပါ။ ဒီအဆင့်မှာ ကြော်ငြာတာဟာ အထိရောက်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာပြည်ကို မရောက်ခင် ဖတ်တဲ့ PRE-ARRIVEL TRAVEL MEDIA ကို ဖတ်တဲ့သူ ဈေးကွက်ကို ထိုးဖောက်ရောင်းချချင်တယ် ဆိုရင် Myanmar Travel Informaion (MTI) Web Portal + Mobile App မှာ ကြောငြာပါ။
2.Yangon Travel Information (YTI)
Booklet Mobile Apps
Tourist အများစုဟာ ရန်ကုန် ကိုရောက်လာပြီးမှာ တော့ Tour Company တစ်ခုမဟုတ် တစ်ခုနဲ ချိတ်ပြီးလောက်ပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ အခြားမြို့တွေကို သွားလည်ဖို့ လေယဉ်လက်မှတ်၀ယ်တယ်။ ရက်ပြောင်းတယ်။ Hotel Booking တင်လေ့ရှိတယ်။
မြို့ထဲလျှောက်သွားတဲ့ အချိန်မှာ Street Map ကို အလိုအပ်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
နေလယ်စာနဲ ညစာစားဖို့ တစ်ရက် ဆိုင် ၂ ဆိုင်ရှာ တတ်ပါတယ်။
မြန်မာပြည်ရောက်တုန်း ကမ္ဘာကျော် မြန်မာ့ ကျောက်မျက်ရတနာတွေကို အရမ်း၀ယ်ချင်ကြတာ လူကြီးမင်းတို့ အသိပါ။
ဒီအချိန်တွေမှာ Gems/Jewellery. Ticketing Agent, Airlines, Hotels, Handicraft, Art Gallery, Restaurant, Bars, Club တွေကို ကြော်ငြာရင် အထိရောက်ဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာပြည်ကို ရောက်ပြီးမှ ဖတ်တဲ့ POST-ARRIVEL TRAVEL MEDIA ကိုဖတ်တဲ့သူ ဈေးကွက်ကို ထိုးဖောက် ရောင်းချချင်တယ်ဆိုရင် Yangon Travel Informationm (YTI) BOOKLET + MOBILE APPS မှာကြော်ငြာပါ.။
Created on Sunday, 15 September 2013 04:44